ICoripoipo: Konke odinga ukukwazi mayelana ne-Cute Corgi Poodle Mix - Izinhlobo
Obeye aziwe njengo I-Corgidoodle noma Umxube weCorgi-Poodle , iCorgipoo iyi-pooch ebukekayo enezinwele ezisontekile enemilenze yenkani!
Ngaphandle kokubukeka okuhle, le nja izuza ifa le- ukudlala futhi ubuhlakani yabazali bayo. Le nhlanganisela nayo iyi- onothando uhlobo oluzokwenza ukwengeza okuhle kunoma iliphi ikhaya.
Ingabe uhlela ukuyithola? Uma kunjalo, funda umhlahlandlela wethu ukuze wazi ukuthi yini ongayilindela ekubeni ngumnikazi walesi siphambano.
Ngabe i-Corgi Poodle Mix ibukeka kanjani?
Imiphumela Yesithandani Esinamandla
Ungayinakekela kanjani i-Corgidoodle yakho
Ingabe i-Corgipoos i-crossbreed enempilo?
Ngabe kuzoba lula ukuthola eyami iCoripoipo?
ICorgipoo vs. Amanye “ama-poos” nama- “doodle”
Ingabe iCorgipoo ingumngane ophelele kimi?
ICorgipoo iyi- umngane inja lokho kwavela e-United States.
Ngawo-1980, abantu bawela iPoodle ngezinhlobo ezahlukahlukene ukuze bathole inja ngejazi le-hypoallergenic .
Enye yalawo ma-doodle yiCorgipoo, inhlanganisela phakathi kwe- UCorgi kanye ne- Poodle .
Abafuyi bavame ukusebenzisa i- I-Pembroke Welsh Corgi kanye ne- I-Poodle encane ngoba kwakulula ukuxuba izinja ezimbili ezihlukene ezinosayizi ofanayo. Kepha le nja yomklami nayo ingaba ne- ICardigan Welsh Corgi kanye ne- Ithoyizi noma Okujwayelekile Poodle njengabazali.
Uyini umehluko phakathi kwala maCorgis namaPoodle? Ake sithole okwengeziwe ngohlobo ngalunye lomzali.
AbakwaWales Corgis ukufuya izinja kusuka eWales, e-United Kingdom. Basizile abalimi ngokuthatha izinkomo ziyoklabisa emasimini nokuqapha isibaya.
Kulula ukuhlukanisa iCorgis ngenxa yayo umzimba side isakhiwo sihlanganiswe ngokungalingani imilenze emifushane . Bane- ikhanda elikhulu elifana nempungushe enezindlebe ezimile.
Ngaphandle kokwenza wonke umuntu athandane nalawo ma-bubble butts amahle namehlo enja ye-puppy, uCorgis naye unomoya omuhle. Kunjalo abangane abazinikele abathanda ukuba phakathi kwabantu. Futhi bayizinja ezihlakaniphile okulula ukuziqeqesha ngoba ifunda ngokushesha. Futhi ngaphandle kobukhulu bazo, lezi esebenzayo futhi ezemidlalo ama-canines athanda ukusebenza nokwenza imisebenzi yomzimba.
Bangu ukwehluka okubili kweCorgis : ICardigan Welsh Corgi nePembroke Welsh Corgi. Lezi zinhlobo ezimbili azikaze ziphazamisane ngaphandle kweminyaka embalwa emuva ngawo-1930.
ICardigan Welsh Corgi
AmaCardigans zitholwe ngonyaka we-1200 BC eCeredigion (phambilini eyayiyiCardiganshire), izwe elinamadwala eningizimu-ntshonalanga yeWales.
Lolu hlobo lunezindlebe ezinkulu, eziyindilinga nomsila omude. Ijazi labo lingavela ngale mibala:
Ukuhlangana okuluhlaza okwesibhakabhaka
Omnyama nomhlophe onamabala amnyama
Bomvu futhi sable enezimpawu ezimhlophe
ICardigan inokuphakama kwamasentimitha ayi-10.5 kuye kwayi-12.5 (27 to 32 cm). Eyeduna ingaba nesisindo esingafinyelela kumakhilogremu angu-17, kanti izinsikazi zinesisindo esiphezulu samakhilogremu angu-15.
Le pooch ivame ukuba kude futhi igcinwe. Kodwa ungangizwa kabi, iCardigan iyinja enobungane, kodwa kuthatha nje isikhathi eside ukuthi ikhululeke phakathi kwabantu abasha.
I-Pembroke Welsh Corgi
Emuva ngo-1000 AD, Ama-Pembrokes zitholakale ePembrokeshire, izwe elisendaweni eyisicaba eningizimu yeWales.
Esinye sezici ezivelele zalolu hlobo lwezinhlobonhlobo zezindlebe ezicijile ezabo imisila edokodo icindezelwe emzimbeni wayo. Kwesinye isikhathi iPembroke ingaba njalo ezalwa ngaphandle komsila .
Ngejazi lePembroke, okuwukuphela kwemibala eyamukelekayo sable, obomvu, noma ukuxubana kokubili okunomaka omhlophe.
IPembroke inokuphakama okuphakathi kwama-intshi ayi-10 kuye kwayi-12 (25 to 30 cm). Ezeduna zingaba nesisindo esikhulu samakhilogremu angu-13, kanti ezesifazane zingaba nesisindo esingamakhilogremu angu-13.
Ubuwazi ukuthi iRoyal Corgis oyibona neNdlovukazi u-Elizabeth II yibo ephumayo futhi enamandla Ukushaywa?
Noma iPoodle iyinja kazwelonke yaseFrance, lolu hlobo lwavela eGermany eminyakeni engaba ngu-400 eyedlule. Bakhuliswa njenge- umzingeli wedada futhi a ukubuyisa amanzi . Kungumsebenzi ophelele wale hound kwazise iyabhukuda elihle kakhulu elinengubo emelana namanzi.
I-Poodle inokuhlukahluka okuthathu: Ithoyizi, iMini, neStandard. Lezi ezintathu zinokubukeka okufanayo, izakhiwo zomzimba, kanye nenani. Bonke bane- a curly, ijazi le-hypoallergenic lokho kungafika kumhlophe, kumnyama, noma ibhilikosi.
Umehluko obonakala kakhulu phakathi kwalezi zinhlobo ezintathu zePoodle ngosayizi wazo. Ithoyizi linokuphakama okuphezulu kwe- Amasentimitha ayi-10 (25 cm), iMini inokuphakama phakathi Amasentimitha angu-11 kuya kwangu-14 (28 kuye ku-36 cm), ngenkathi iZinga linjalo ubude kunamasentimitha ayi-15 (38 cm).
Akunandaba ukuthi ithola usayizi onjani, le canine iyaqeqeshwa futhi ihlakaniphile . IPoodle ibalwa njenge- uhlobo lwesibili oluhlakaniphe kakhulu emhlabeni. Futhi iyinhlangano yezemidlalo futhi enomusa - akumangalisi ukuthi idlula ngokuncintisana ngokulalela, ukulandelela, nokushesha!
Kodwa kwesinye isikhathi iPoodle’s ubuntu bungahluka phakathi kosayizi. Akusebenzi kuyo yonke i-Poodle, kepha nazi izici ezithile uhlobo ngalunye ezingaba nazo.
I-Toy Poodle ingumngane omuhle kakhulu kepha iyacasuka kalula. Lolu hlobo futhi luncane futhi lubucayi kunezinye ezimbili, ngakho-ke ngeke lukwazi ukuphatha ukudlala kanzima.
IMini noma iMiniature Poodle ayizweli kangako ekuxeketheni futhi inothando kakhulu. Kepha inokuthambekela okuphezulu kokuthuthukisa ukukhathazeka ngokwehlukana ngoba lokhu kwehluka kukhetha ukuba nabanikazi bayo ngaso sonke isikhathi.
IPoodle esezingeni elijwayelekile iyona esebenza kakhulu kulezi ezintathu. Banobungane kakhulu kodwa bagcinwe kakhulu kunamanye amabili. Amazinga akhetha ukuba nomsebenzi okufanele awenze, njengokuba inja yokubuka.
Ngemuva kokubhekana nesizinda seCorgi nePoodle, sekuyisikhathi sokufunda kabanzi ngenzalo yabo.
Ngabe iCorgipoos yamukelwa ngamakilabhu amakhulu kennel?
Njengoba isiphambano sikaPoodle noCorgi siwuhlobo oluxubekile, kunjalo ayaziwa amakilabhu amakhulu ekennel njenge-American Kennel Club (AKC).
Kepha le hybrid yamukelwa yi-ICA ​​(International Canine Association, Inc) kanye ne-American Canine Hybrid Club (ACHC). ICorgipoos nayo yamukelwa yilaba babhalisi:
Inja Registry yaseMelika
I-International Designer Canine Registry (IDCR)
Iningi lamaCorgidoodle lizokwenza kufana nesiqu seCorgi , ifa njengefa lomzimba wayo omude nemilenze emifushane. Kodwa njengoba lokhu kuhlanganiswa futhi kunezakhi zofuzo zePoodle, kunethuba lokuthi izothola izitho ezinde.
ICoripoos inekhanda eliyindilinga nomlomo ofana nempungushe. Zinezindlebe eziyindilinga ezingaba yi-floppy njenge-Poodle noma zime njenge-Corgi. Futhi zinamehlo amnyama amise okwe-alimondi nekhala elimnyama.
Iningi lamaCorgidoodle livame ukwenza njalo ifa lezinwele zikaPoodle , okuyibhantshi eliphakathi noma elide elibushelelezi futhi linentambo. Uboya bayo bangaphandle obuminyene buminyene futhi abunamanzi, kanti ijazi langaphakathi lithambile futhi liyathambile ukugcina le pooch ifudumele.
Ungathola lolu hlobo lomklami ngombala omnyama, omhlophe, onsundu, ompunga, okhilimu, obomvu, noma umxube wale mibala.
Umxube weCorgi Poodle ungathola amaphethini wokuhlangana, amachashazi, noma amachashazi kunoma imiphi imibala eshiwo.
Bheka le vidiyo yemidlwane emihle yeCorgipoo enemibala ehlukene. Kubukeka sengathi lemidlwane iyizinhlobo ezihlukile!
Ingabe alingana noCorgi noma alingana noPoodle?
ICorgipoos ingaba phakathi noma phakathi. Ngokuya ngokuhlukahluka kwePoodle okukhuliswe nabazali bayo baseCorgi, lokhu kuqhekeka kungafika ngosayizi abathathu: ithoyizi, elincane, noma eliphakathi nendawo .
Ama-Corgidoodles akhule ngokugcwele anokuphakama okumaphakathi phakathi Amasentimitha ayishumi kuya kwangu-20 (25 kuya ku-50 cm) futhi ikala phakathi 12 kuye ku-40 amakhilogremu (5 kuya ku-18 kg). Kepha lezi zinombolo zingashintsha kuye ngosayizi wabazali bazo bePoodle.
Noma ngabe yiluphi usayizi olukhethayo, lolu hlobo luzoba efanelekayo ukuhlala efulethini ; inqobo nje uma unganikeza izidingo zabo zokuzivocavoca nsuku zonke. ICorgi & Poodle Cross nayo ingathanda ukuhlala endlini enegceke noma ingadi ukuze ikwazi ukugijimela ngaphandle noma iphumule ngaphandle noma kunini lapho ifuna khona.
Uma kuqhathaniswa nokubukeka kwayo, ubuntu beCorgi-Poodle Mix abuzohluka kakhulu.
Njengoba bobabili iCorgi noPoodle bahlakaniphile futhi bethandana, lolu hlobo luzuza ubuntu obufanayo.
Ake sibone ukuthi kunjani ukuba ngumnikazi walesi sifo.
Ukwengeza okuhle kunoma iliphi ikhaya
Ngabazali abayizilwane ezifuywayo ezithandwayo zomndeni, akumangazi uma iCorigpoo nayo ifana. Kunjalo mnandi , okuphumayo, futhi uyathanda ukuba nobudlelwano .
Lolu hlobo lokudlala nolunempilo luzohlangana kahle nezingane nentsha. Ngempela bazojabulela isikhathi sokudlala nokuba isikhungo sokunakwa.
Abanye bathi iCorgi & Poodle Mix iyi- ononya pooch othanda ama-antics. Kubi kakhulu ngoba iCorgidoodle iyathandeka, uzoba nobunzima bokuyithukuthelela!
Uma unezinye izilwane ezifuywayo ekhaya lakho, ungaqiniseka ukuthi iCorgipoo ngeke ibe nenkinga yokusebenzisana nabo. Le canine ingathanda ngisho nokuba nezinye izinja noma ngisho amakati nxazonke kusukela lapho akathandi ukuba yedwa .
Le canine enobungani izokwamukela nezivakashi zakho noma abangani bakho ekhaya lakho. Kepha ungakhathazeki, iCorgidoodle iyinja ethembekile futhi ephapheme ezoma ibuke futhi ikhonkothe ​​uma kukhona okungaba usongo.
I-fluffball enamakhono amaningi
Noma iCorgipoo iklanyelwe ubungani, futhi kuzoba inja esebenza kahle kakhulu.
Ngokufana neCorgi, amaCorgidoodles angamangalisa ekwaluseni, futhi. Zingaba nokubonga okungcono ekugijimeni komzali wayo wePoodle. Ungathembela kubo ukuthi bazosiza emapulazini nasekuqoqeni nasekuvikeleni imfuyo.
Enye indima amaCorgi Poodle Mixes angayifeza ukuba ngu- insiza noma inja yokwelapha . Le canine emnene ingasiza abantu abanokulahleka kokuzwa, ukukhubazeka okubonakalayo, ne-PTSD.
Le furball enhle isetshenziselwa nokuqeqeshwa kwezempi ngenxa yomzimba wayo omncane, amandla amaningi, namakhono amahle kakhulu okubona.
Corgipoos babe umsebenzi ophakathi nendawo ukuya phezulu amazinga futhi azodinga ihora lokuzivocavoca ngosuku. Ungasabalalisa isikhathi esidingekayo usuku lonke. Mthathe uhambe ibanga elide noma ugijime ngokushesha ekuseni bese udlala umdlalo wakhe ntambama.
Njengoba bobabili abazali bayizinja ezihlakaniphile, iCorgidoodle kuvela okufanayo. Ngibe nenhlanhla kuwe, lokhu kuzalana kuzoba kulula ukuqeqesha kune-Corgi enenkani ngoba ithola isimo sengqondo sokulangazelela ukujabulisa uPoodle kanye nekhono lokufunda ngokushesha.
Uma unikeza ukuqeqeshwa okungaguquguquki nokuqiniswa okuhle, kuzosiza ingane yakho ifunde ngokushesha. Lokhu kuqhekeka futhi kuvame ukuphazamiseka, ngakho-ke kungasiza uma wenza izifundo zayo zibe zifushane futhi zijabulise.
Esinye sezizathu ongafuna ukuthatha i-Corgipoo ekhaya kungenxa yokuthi uzodinga ukuzilungisa okuncane kunePoodle. Noma evame ukuthola ifa lejazi elifanayo lePoodle, ngeke kube njengokuthanda ukumatting noma ukuminyana ngenxa yezakhi zofuzo zakhe zeCorgi.
Izidingo zokuzilungisa zikaCoripoipo
Umxube weCorgi Poodle ungaba ngokulinganisela noma ongasebenzi kuya ngokuthi iliphi ijazi lomzali elithatha ngaphezulu ngemuva.
Uma i-canine yakho ithola ijazi lePoodle, uzoba ne- okungachithi ijazi le-hypoallergenic . Kepha uma enezinwele ezifanayo neleCorgi, uzoba ngumchithi ophansi noma olinganiselayo futhi angaqala ukungezwani nezinja.
Noma iCorgidoodle yakho ilidla ifa ijazi likaCorgi, uzokhipha okuncane ngenxa yezakhi zofuzo zakhe zePoodle.
AmaCoripoipo angakwazi futhi ukuzivumelanisa nezimo zezulu ezahlukahlukene, kepha-ke, kunomkhawulo. Ungavumeli ukuthi ichithe isikhathi esiningi ngaphandle uma kuyisimo sezulu esiyikhulu noma esingesihle.
Akunandaba ukuthi iyiphi le ngubo le Corgi & Poodle Cross etholwayo, idinga ukuthi ibhulashiwe kanye ngosuku ngebhulashi elisheshayo ukuyigcina iphilile futhi icwebezela.
Uma bethola izinwele ze-Poodle ezingamanzi namanzi ezingasebenzisi ukungcola, uzodinga kuphela ukunika i-pooch yakho ukugeza kanye ngenyanga noma lapho kudingeka.
Ngenkathi sikudaba lokuzilungisa, izinzipho zakho ze-pooch zizodinga ukugunda kanye ngeviki . Ngasikhathi sinye, hlola ukuthi ngabe kukhona yini okwakhiwe nge-wax noma imfucumfucu ezindlebeni zabo. Lihlanze ngokushesha ngendwangu emanzi ukugwema noma yikuphi ukutheleleka.
Njengoba iCardigan Welsh Corgi neMiniature Poodle kuthanda ukuba nezinkinga zamazinyo, xubha amazinyo akho eCorgidoodle njalo emavikini amabili ukuphepha.
Udla ini uCorgipoos?
Umxube wakho weCorgi Poodle uzodinga 1 inkomishi kokudla kwezinja okuseqophelweni eliphezulu kwezinhlobo ezincane ngosuku. Uma i-pooch yakho yinde ngaphezu kwamasentimitha angama-38 (38 cm), engeza inkomishi yesigamu ekudleni kwayo kwansuku zonke.
Njengoba iCorgi noPoodle bobabili othambekele ekukhuluphaleni ngokweqile , qiniseka ukuthi wondla iCoripoipo yakho inani elifanele lokudla angaba nalo usuku. Xwayiswa: le pooch iyakuthanda ukudla futhi ngeke ikufulathele noma ikuphi ukudla okubeka phambi kwakhe.
Musa ukumondla kanye; hlukanisa i-kibble yabo ibe izidlo ezimbili , omunye ekuseni omunye kusihlwa. Ukondliwa kabili kusho ukuthi angadla nawe ngesikhathi sokudla kwasekuseni kanye nangesikhathi sedina.
Ukuba yinja esebenzayo, lolu hlobo ludinga ukudla okunamaprotheni amaningi . Amaphrotheni angasiza ekuvuseleleni amandla awo futhi azosiza ukugcina izinwele nezikhumba zawo ziphilile.
Ngeshwa, cha. Kungenxa yokuthi iCorgipoo ingazuza njengefa izifo eziningi kubazali bayo.
Isiqu seCorgi singabukeka sithandeka, kepha ukuba nemilenze emfushane kakhulu ngokulingana nomzimba empeleni yisimo esibizwa I-Achondroplasia Dwarfism .
Njengoba iningi leCorgipoos linemilenze emifushane njengeCorgi, lingabuye libuye nezinkinga ezihlangene. Ekugcineni, inkinga ingaholela ekuphazamisekeni komgogodla okuqhubekayo okuthiwa I-Canine Degenerative Myelopathy .
Uma inja yakho iba nale mibandela, engeza i-chondroitin ne-glucosamine supplement ekudleni kwayo.
ICorgidoodle nayo ingathola ifa lokuphazamiseka kwegazi njenge Isifo seVon Willebrand kusuka kuCorgi.
Kusuka ePoodle, iCorgipoo isengozini yokuthola isifo esibizwa ngama-hormone Isifo i-Addison kanye nezinkinga zezinso. Ama-Poodle nawo athinteka i-canine isithuthwane futhi zivame ukuqumba.
Bobabili abazali baziwa nangokuthi bathola Ukuqhubekela phambili kwe-Retinal Atrophy futhi I-Hip Dysplasia .
Ngaphandle kwalokhu okushiwo, nazi ezinye izingqinamba zezempilo i-Corgidoodle engazithola:
Isifo Sokuqina Kwe-Legg-Calve
Izinkinga zamehlo ezinjengeCataract neGlaucoma
Okwe-canine engathola ifa lokugula okuningi kwezempilo, kunesikhathi eside sokuphila se- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-14 . Ukusiza i-Corgi Poodle Mix yakho ikhulise isikhathi sempilo yayo, qiniseka ukuthi uhlinzeka ngezidingo zakhe zokudla okunempilo nokuvivinya umzimba nsuku zonke. Ngeke wazi, ngothando lwakho nokunakekela, i-pooch yakho ingaphila isikhathi eside kunokulindelekile.
Ngoba iCorgi Poodle Cross ayivamile futhi iyinja yomqambi yakamuva, kungaba nzima kakhulu ukuthola le ngxubevange. Ungathengi i-Corgidoodle kunoma ngubani nje ngoba abanye abahlanganisi abalandeli inqubo ejwayelekile yokuzalanisa abalimi abahlonishwayo.
Ngaphambi kokuthenga umdlwane, qiniseka ukuthi unamarekhodi ezokwelapha namaphepha. Kufanele futhi ubuze umfuyi ngomlando womzali wakhe ngoba iCorgi nePoodle banezinkinga eziningi zezempilo.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ezihlanganayo, i-Corgi Poodle Mix ayibizi kangako. Ungayitholela umdlwane omuhle weCorgipoo $ 350 uku $ 1,000 !
Uma uthola, ungathola lolu hlobo ngenani eliphansi. Ungakucabanga nokuthola i-Corgipoo endala uma ukhetha ukuthola i-crossbreed okubukeka kwayo nobuntu bayo busethwe.
Esinye sezizathu sokuthi uhlobo oluxubekile luphele endaweni yokukhosela kungenxa yezimpawu nezici zalo ezingalindelekile. Abanye abantu abayithandi indlela obuvele ngayo ubungako bomdlwane wabo, ukubukeka kwabo, nobumnene babo, ngakho-ke bayabashiya.
Hlola Ukutakulwa Kwe-Poo Mix uma kukhona ama-Corgidoodles afuna umndeni omusha. Uma kungenjalo, ungathola ukuhlanganiswa okuhlukile kwePoodle ofuna ukuya nakho ekhaya.
Kwesinye isikhathi izindawo zokutakula zasePoodle naseCorgi nazo ziqukethe izinhlobo ezixubekile. Ungathola futhi i-Corgi Poodle Mix etholakalayo kulezi zingosi:
Ngikhulule for Corgis futhi Ama-Poodle
Ukutakulwa KweCarolina Poodle
Uma ungakhathazeki ngokungaqiniseki, nakhu abanye abafuyi bokukusiza uthole isiqalo ekusesheni kwakho umdlwane wakho weCoripoipo:
Ulwanga Lwami Olukhulisiwe (ENtshonalanga Texas)
Iziphambano zePoodle zaziwa ngoba zivame ukuba namajazi we-hypoallergenic. Iningi lalezi zinja liphuma nejazi olifunayo, kepha kukhona amacala angeke.
Njengoba lezi zinqamulelayo zinomzali oyedwa, isimo sazo singafana. Ake sihlole ukuthi yini eyenza lezi zingxube zePoodle zehluke kuneCorgipoo.
ICoripoipo vs. Cockapoo
I- I-Cockapoo ukuxubana phakathi kweCocker Spaniel nePoodle. Uma kuqhathaniswa ne-Corgidoodle, le nja yomklami inezidingo eziningi zokuzilungisa. Amazinyo eCockapoo adinga ukuxutshwa nsuku zonke kwazise ijwayele ukuthola izimbotshana nezifo.
Le canine futhi inamazinga aphansi wamandla. ICockapoo idinga kuphela Imizuzu engu-15 yokuzivocavoca okungasetshenziswa ngokuhamba okufishane noma ngomdlalo wokulanda.
Le nja yomklami nayo ihlushwa ukukhathazeka ngokwehlukana , ngakho-ke ingathanda ukuhlala iseduze nomnikazi wayo.
Kubiza kakhulu ukuthola i-Cockapoo, kepha kufanelekile uma impilo ende ibalulekile kuwe ngoba inempilo ende yeminyaka eyi-14 kuya kwengu-18 futhi ine zimbalwa izinkinga zempilo .
ICoripoipo vs. Maltipoo
I- Maltipoo iyinzalo yabantu baseMalta nasePoodle. Uma kuqhathaniswa neNhlanganisela yeCorgi Poodle, iMaltipoos inamazinga aphansi wamandla futhi inesidingo kuphela Ukuzivocavoca imizuzu engu-30 ngosuku.
Ngeke futhi ushiye lolu hlobo lodwa isikhathi eside njengoba enakho ukukhathazeka ngokwehlukana futhi akazimele kangako. Uma iMaltipoos inesizungu, izolimaza futhi iqale bekhipha ijazi labo .
Nge-Maltipoos, kufanele ukhumbule ukuthi uhlobo oluthile oluncane lwesinye. Bazodinga ukuthi bachame ngaphezu kwenja ejwayelekile. Uma bedinga ukuya endlini yangasese ebusuku, lezi zingcuba ziyohlala zikhonkotha zize zikhululeke ngaphandle.
Kepha ngaphandle kokunamathela kwabo nezidingo zamanzi, iMaltipoo inayo izinkinga ezimbalwa zezempilo kuneCorgipoo.
ICoripoipo vs. Cavapoo
I- ICavapoo yisiphambano phakathi kwe- Inkosi yamahhashi uCharles Spaniel kanye nePoodle. AmaCavapoos anezinga eliphansi lomsebenzi futhi anelisekile ngemuva kwe- Ukuzivocavoca kwemizuzu engama-30 .
Ijazi leCavapoo alidingi ukubhulashwa nsuku zonke, kepha livame ukuthola izinyembezi namabala ebusweni bayo. Ukukugwema, kufanele uhlale ubheka ukukhishwa kwamehlo bese usula ngaphambi kokuthi kome noma kungcolise amabala.
Uma unezinye izilwane ezifuywayo ekhaya lakho, kungcono ukuthola iCorgipoo kwazise iCavapoo inedrayivu ephezulu yezisulu futhi ngeke kube nobungane maqondana nezinye izilwane ezifuywayo.
Amanye amaPoodle neCorgi Crossbreeds
Uma unentshisekelo yokuhlola ezinye izinhlanganisela ze-Poodle ne-Corgi, nazi ezinye zezinhlamvu zawo ezidumile:
I-Schnoodle (ISchnauzer nePoodle)
Shih Poo (Shih Tzu noPoodle)
Umabhebhana (ILabrador nePoodle)
I-Bernedoodle (Inja yaseBernese Mountain nePoodle)
I-Goldendoodle encane (IGolden Retriever nePoodle)
Imvu yezimvu (I-Old English Sheepdog ne-Poodle)
I-Labradoodle yase-Australia (ILabrador, iPoodle, neCocker Spaniel)
UHorgi (UHusky noCorgi)
Corman (UCorgi noMalusi waseJalimane)
Pomapoo (IPomeranian nePoodle)
UDorgi (UCorgi noDachshund)
I-Poochon ( I-Bichon ne-Poodle )
ICorgipoo iyi- mnandi futhi uhlakaniphile inja ekwazi ukuzivumelanisa nezindlela zokuphila ezahlukene. Le nja yomklami ilungele imindeni enezingane, abanikazi bezinja abasha, nabantu abathanda ukusebenza.
Uma uhlala ekhaya elinendawo elinganiselwe, qiniseka ukuthi i-Corgidoodle yakho ithola ukuzivocavoca umzimba kwansuku zonke. Ngefayela le- izinga eliphezulu lomsebenzi , kufanele bakwazi ukukhipha amandla abo amaningi.
Le canine nayo iyi- inja enakekela kakhulu , ikakhulukazi njengoba ijwayele ukuthola ijazi likaPoodle. Udinga ukuxubha izinwele zakhe nsuku zonke futhi uvame ukumyisa kumkhwenyana uma ukhetha ukugunda izinwele okuthile.
Lesi Corgi nePoodle Cross naso sifuna ukuba nomnikazi waso isikhathi esiningi futhi sizonde ukuba sodwa. Uzodinga ukwenza isikhathi sakhe ngangokunokwenzeka.
Ngabe unayo iCorgipoo noma uhlela ukuyithola? Sifuna ukuzwa konke mayelana nokuhlangenwe nakho kwakho ngale furball ethandekayo! Yabelana ngendaba yakho nathi esigabeni sokuphawula ngezansi.
Amaqhinga wezinja angama-45 Ungayifundisa kalula inja yakho
Amaqiniso Okufanele Uwazi Nge-American Bully
shih poo emnyama ikhule ngokugcwele
ibhubhu elimnyama umgodi uhlanganise umdlwane
umugqa omkhulu omnyama onesifuba esimhlophe
intengo yezinwele ezinde ze-chihuahua